साँढु टिकेनन्, सालोलाई के दिलाउने ?
राजनीतिक र कानुनी बृत्तमा मात्र होइन, सर्वसाधारणले समेत चासो दिएर चर्चा गर्ने गरेको विषय गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री किन बनाइयो ? भन्ने नै हो । बारका सदस्यले के हो भनेर प्रधानन्यायधीशलाई नै सोधे, यति हुँदा पनि प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले गैरसांसद गजेन्द हमाललाई मन्त्री बनाउनु पर्ने कुनै कारण खुलाएका छैनन् । अन्ततः विरोधको बाढीमा मन्त्री गयो ।
प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बनाउन सक्छन्, संविधानले सुविधा दिएको छ । तर गजेन्द्रमा सरकारलाई सहयोग गर्ने के त्यस्तो क्षमता छ र मन्त्री बनाइयो ? पार्टीका सांसद समेत चकित परेका छन् । सबैको शङ्का छ, परमादेशबाट देउवा सरकार बनेपछि प्रधानसेनापतिले जेठू गजेन्द्र र सालो आइटी विज्ञ दीपक तिमिल्सिनालाई मन्त्री बनाउने कोटा मागेका थिए । जेठू गजेन्द्र हमाल मन्त्री भए, ३ दिनमै राजीनामा दिए । अब दीपक तिमिल्सिनाले के पाउने हुन् ? दीपक तिमिल्सिना पूर्व सर्वोच्चकै कर्मचारी थिए, कल्याण श्रेष्ठको कार्यकालमा उनलाई बर्खास्त गरिएको थियो । तर उनी अहिले पनि मुद्दाको सेटिङ् मिलाउँछन् भनिदैछ ।
पहिले त यिनै दीपक तिमिल्सिनालाई सञ्चार मन्त्री बनाउने चर्चा थियो, ५ पार्टीलाई भाग लगाउन नपुगेका कारण दीपक मन्त्री बन्न पाएनन् । प्रधानन्यायाधीशकी पहिलो श्रीमतीका भाई गजेन्द्रका कारण उनीमाथि नैतिक प्रश्न खडा हुनपुग्यो ।
प्रधानन्यायाधीश नै यसरी राजनीतिक कोटामा मुछिनुलाई लोकतान्त्रिक इतिहासमै कलङ्क मानिएको छ ।